नमोबुद्धका मेयर टि.पि. शर्मा तिमल्सिनालाई पितृ शोक – Radio Roshi
नमोबुद्धका मेयर टि.पि. शर्मा तिमल्सिनालाई पितृ शोक
जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकाका मेयर टिपी शर्मा तिमल्सिनालाई पितृ शोक परेको छ ।
मेयर तिमल्सिनाका पिता इन्द्र प्रसाद तिमल्सिनाको ८७ बर्षीय उमेरमा आज निधन भएको हो । उनको आफ्नै घरमा निधन भएको पारिवारीक श्रोतले जनाएको छ ।
मृतक इन्द्र प्रसाद तिमल्सिनाको आजै जगबैजेश्वर त्रिबेणीघाटमा अन्त्यष्टी गरिएको छ ।